Nintendo Gbanwee emulators maka PC na gam akporo | Nzukọ mkpanaaka
Nintendo Switch emulators maka PC na gam akporo
Ụlọ Ignatius | 20/11/2021 12:00 | Mmemme
Kemgbe mmalite ya na 2016, Nintendo Switch aghọwo otu n'ime consoles kacha ere na-adịbeghị anya, ngwa ngwa njikwa nke nwere ndị na-ege ya ntị na nke ahụ abụghị onye ọzọ karịa ndị hụrụ Nintendo oge ochie na ụmụaka.
Nintendo Switch bụ console nke na-adịghị ada ọnụ ahịa ka oge na-aga ma ọ siri ike ịchọta, ma ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume, onyinye ọ bụla na-atọ ụtọ maka njikwa a. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịzụta ya, anyị nwere ike iji a Nintendo Switch emulator maka PC na gam akporo.
M na-ekwu na, maka PC na gam akporo, n'ihi na Apple anaghị ekwe ka emulator ngwa dị na App Store, otú jiri ngwaọrụ iOS kpọọ Nintendo Switch Ọ bụghị nhọrọ.
1 Nintendo Switch emulators maka PC
2 Nintendo Switch emulators maka gam akporo
3 Nintendo Switch emulators ọ bụ iwu kwadoro?
Nintendo Switch emulators maka PC
The Yuzu emulator bụ, ka ọ dị anya, Nintendo Switch emulator kacha ewu ewu maka PC na nke anyị nwere ike iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu Switch ọ bụla nwere arụmọrụ mara mma.
Nke a emulator e kere site Ndị mmepe Citra, Nintendo 3DS emulator ewu ewu. Maka ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ na ụwa nke emulators, ọ nwere ike ịdị mgbagwoju anya na mbụ, Otú ọ dị, na ịntanetị na YouTube nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nduzi na nkuzi.
Yuzu na-ewu ewu nke na a na-eji ya dị ka ntọala iji mepụta emulators ndị ọzọ maka Switch na anyị na-egosi gị n'isiokwu a, ọ na-enye anyị ohere. egwu ruo 4K mkpebi, ma ọ bụrụ na akụrụngwa anyị nwere arụmọrụ dị mma yana dakọtara na eserese Nvidia na AMD.
Ọ na-akwado ndị egwuregwu atọ A kacha atọ, yabụ anyị nwere ike ịkpọ ọ bụla n'ime ndị na-ere ahịa kacha mma kacha mma nke njikwa a dị ka Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda. Na nke a njikọ, ị nwere ike ịhụ ndepụta nke egwuregwu niile dakọtara na Yuzu.
Ihe ọjọọ nke emulator a bụ nke ahụ Ọ bụghị ndị njikwa niile dakọtara, nsogbu ma a bịa n'ịkwado ọsọ nke foto na mgbagwoju anya ya mgbe ị na-ahazi.
Ka ibudata Yuzu, ị nwere ike kwụsị oru ngo a mepere emepe y budata ya n'efu.
N'adịghị ka YuZu, Ryujinx bụ emulator ukwuu mfe hazi, ma ọ naghị enye anyị otu atụmatụ ahụ, ma anyị nwere ike ịtụle ya dị ka nhọrọ nke abụọ kachasị mma iji ṅomie Nintendo na PC, Mac ma ọ bụ Linux, na-enye anyị ohere ịme egwuregwu na kacha nke 60fps n'ụzọ kwụsiri ike na zuru oke. ngwaike.
N'ịbụ nke dị mfe ịhazi, ọ bụrụ na ịgaghị agbagha ndụ gị iji nwee ọ enjoyụ egwuregwu Switch na PC gị, nke a bụ ngwa kachasị mma, ngwa nwere interface dị mfe iji na. nwere ihe karịrị 1.000 egwuregwu dakọtara, ọ bụ ezie na ọ bụ nanị ọkara n'ime ha na-arụ ọrụ nke ọma taa.
Iji budata emulator Ryujinx, ị nwere ike ime ya site na ebe nrụọrụ weebụ gị na ịpị njikọ a.
Cemu bụ otu n'ime ha mbụ emulators nwere ike na-agba ọsọ Nintendo Switch egwuregwu, ma, na mgbakwunye, ọ na-enyekwa anyị ohere ịnụ ụtọ aha sitere na Gamecube na Wii U. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nhọrọ kachasị mma iji nwee mmasị na aha site na Switch, ndị mmepe na-emelite emulator a kwa oge iji meziwanye arụmọrụ ya ma tinye atụmatụ ọhụrụ.
Ọ dakọtara na Nvidia na AMD eserese, chọrọ Windows 7 64-bit ma ọ bụ karịa na 4 GB nke ebe nchekwa, yana 8 GB ego akwadoro. Gbanye njikọ a, ị nwere ike ịhụ egwuregwu niile nke emulator na-akwado.
Na-enye anyị ohere kpọọ ọtụtụ aha na 1080 na 60fps, Ọ nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nhọrọ dị elu nke na-enye anyị ohere ịmegharị nsụgharị, mkpebi, shading na, na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịgbanwe aha ozugbo site na ntọala mmalite, nke nwere ike ime ka ahụmahụ ahụ dịkwuo ụtọ karị. .
Ihe ọjọọ nke emulator a bụ nke ahụ ọnụ ọgụgụ aha akwadoro pere mpe na nhazi nke njikwa bụ ihe ọ bụla ma ọ dị mfe. Ị nwere ike ibudata emulator ozugbo site na webụsaịtị ya njikọ a.
Nintendo Switch emulators maka gam akporo
N'ime Nintendo Switch, enwere ngwaike yana ihe nrụpụta ARM, otu nke ahụ bụ na etiti nso nke ekwentị mkpanaaka 4 afọ gara agaAgbanyeghị, ọnụ ọgụgụ emulators dị maka sistemụ gburugburu ebe obibi a na-ebelata nke ukwuu ka ọ bụrụ abụọ.
Android Nintendo Switch Emulator kụrụ ahịa na 2020 ma nwee ike ịgba ọsọ ụfọdụ egwuregwu ama ama na njikwa a dị ka The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Pokémon Let's Go… agbanyeghị, n'ihi oke nke smartphones na n'agbanyeghị na-akwado ruo aha 81, ọtụtụ n'ime ha na-ekogide n'oge egwuregwu.
Nke a bụ otu n'ime emulators na-eji cYuzu PC emulator koodu, nke anyị kwuru banyere ya na mmalite nke isiokwu a, si otú a na-emebi ikike software n'efu.
N'oge a, emulator na-arụ ọrụ naanị na a kpọmkwem akara akara ebe smartphone dabara, agbanyeghị, echiche bụ ịmalite ụdị nke dabara na njikwa ime obodo ọ bụla.
I nwere ozi ndị ọzọ gbasara emulator a site na njikọ a.
Skyline emulator bụ ihe emulator mepere emepe maka Nintendo Switch nke ahụ ka na-etolite na e mere ya ka ọ bụrụ 100% dakọtara na gam akporo, Otú ọ dị, ị nwere ike ịmalite ịnwale ya, ebe ọ bụ na koodu dị site na. GitHub, ọ bụ ezie na ọ nọ n'oge mmepe, ọ ga-abụ na ọ na-adaba ihe karịrị otu oge.
Nintendo Switch emulators ọ bụ iwu kwadoro?
Ọ nweghị emulator kwadoro iwu, ebe ha na-eji teknụzụ nke ụlọ ọrụ ọzọ mepụtara, na nke a Nintendo, na-enweghị ikike, n'agbanyeghị na ọ dịghị nke ndị emulators a na-akwụ ụgwọ.
Na mgbakwunye, egwuregwu niile dị maka gị budata n'efu, nke na-enye aka, ọbụna karịa, na-emerụ ụlọ ọrụ Japan ahụ n'ụzọ akụ na ụba.
Ihe doro anya bụ na onye ọ bụla na-eji emulator bụ n'ihi na ị nweghị ikike akụ na ụba ịzụta console, yabụ mmebi akụ na ụba e chere na ọ bụ nke ndị na-emepụta console na-ebo ebubo mgbe niile na-abaghị uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Nintendo Switch emulators maka PC na gam akporo
Egwuregwu egwu egwu ga-ekpori ndụ na consoles
Gmail paswọọdụ mgbake: niile nhọrọ